"Qingpan" Isivakashi esisodwa, isibulala-magciwane esisodwa, zizwe ukhululekile ukuhlala kunxusa, Idolobha laseVientiane, Isibhedlela iShengjing, iMakethe yaseWu'ai, Ipaki yentsha, indlela ehamba ngaphansi, ibhizinisi elihlanzekile kakhulu igumbi lokulala elingu-1.8 - I-Airbnb
"Qingpan" Isivakashi esisodwa, isibulala-magciwane esisodwa, zizwe ukhululekile ukuhlala kunxusa, Idolobha laseVientiane, Isibhedlela iShengjing, iMakethe yaseWu'ai, Ipaki yentsha, indlela ehamba ngaphansi, ibhizinisi elihlanzekile kakhulu igumbi lokulala elingu-1.8
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-盛京•青畔民宿
U-盛京•青畔民宿 Ungumbungazi ovelele
Izakhiwo zamafulethi yizo zonke izinhlobo ezidumile emhlabeni wonke, okuhlanganisa i-AO Smith heater yamanzi, umshini wokuwasha izigubhu we-Samsung, i-oven ye-Panasonic microwave, i-Philips induction cooker, i-Xiaomi air purifier, nezinto zangasese zaseKorea ezingeniswa kwamanye amazwe. Izinsiza eziphelele, ukukunikeza uhla olugcwele lokuzijabulisa okunenkanyezi ephezulu, uhambo lwebhizinisi kanye namaholide ezivakashi.
Ifulethi litholakala eduze kwe-Qingnian Street esifundeni saseShenhe. Eduze kokuphuma ku-C kwe-Qingnian Park Subway Station. Lesi yisikhungo sezimali saseHuaqiang Golden Corridor. Imakethe yasebusuku iphansi ukusuka efulethini
U盛京•青畔民宿 Ungumbungazi ovelele